Qalabka Kithcen - Ningbo Sellers Union Imp & Exp Co., Ltd.
Qalabka Jikada Jumlada
Sellersunion wuxuu hormuud u yahay ah wakiilka laliska ee Yiwu China, in kabadan 1200 oo shaqaale ah, waxay leeyihiin bakhaar 20000m² ah iyo 10000m² showroom. 23kii sano ee la soo dhaafay, waxaan aasaasnay ​​iskaashi deggan oo leh 10,000+ warshado tayo leh. Waxay u adeegtay 1500+ dukaan -weyne, jumlad, tafaariiqle, iwm. Waxaan daryeeli karnaa dhammaan marxaladaha aad ka soo dhoofsato Shiinaha, waxaan sare u qaadi karnaa tartanka suuqa.
Waxaan bixinaa alaabooyin kala duwan oo alaabada jikada ah, laga bilaabo maacuunta wax lagu kariyo ilaa keydka jikada, iwm. Waxaad sidoo kale noo soo diri kartaa sawirada alaabta aad u baahan tahay ama noo sheeg fikradaada soo-jeedinta, waan dabooli doonaa baahiyahaaga oo dhan Kooxdayada nashqadeynta ayaa sidoo kale bixin kara wax kasta oo naqshadeynta baakadaha gaarka loo leeyahay ama farshaxan, taasoo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u yeelato badeecadaha sumadaha gaarka loo leeyahay.
Wakiilka ugu Fiican Yiwu
Qolka Bandhigeenna Ugu Weyn ee Online-ka ah
In kabadan 500,000 oo alaab online ah iyo 18,000 oo alaab-qeybiyeyaal ah.
Iyada oo adeeg-bixiyeyaasheena hal-joogsiga leh ee hal-abuurka ah, Waxaad si fudud uga soo dhoofsan kartaa alaabooyinka Shiinaha.
Eeg Qaar ka mid ah alaabta cusub
Catelog Kaydinta Cuntada
Katalogga Kaydinta Jikada
Nadaafada Qalabka Nadiifinta
Catelog Qalabka Qalabka Jikada
Catelog Dheriga karinta
Xaashida dubista Catelog
Katalogga Maacuunta Cunnada
Catelog Qalabka wax lagu karsado
Ma rabtaa inaad hesho sahayda jikada ee cusub? Nala soo xiriir hadda, waxaad si fudud uga soo dhoofsan kartaa Shiinaha sahayda jikada cusub. Waxaan haynaa xalal kala duwan, oo dabooli kara baahiyaha noocyada kala duwan ee macaamiisha.
Sababtoo ah waxaan naqaannaa dhammaan suuqyada Shiinaha, waxaad sidoo kale jumlad ahaan u iibin kartaa baahiyaha kale ee maalinlaha ah annaga, sida alaabta guriga, alaabta carruurtu ku ciyaarto, hadiyadaha, sahayda xayawaanka, iwm.
Hel Adeegga Wakiilka Yiwu